Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Hawaii waa gobolka ugu walaaca badan Mareykanka ee lagu noolaado
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Entertainment • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Hawaii waa gobolka ugu walaaca badan Mareykanka ee lagu noolaado.
Celceliska qiimaha guriga Hawaii waa $1,293,301, kan saddexaad ee ugu sarreeya Maraykanka, halka uu sidoo kale leeyahay qiimaha kiraynta ugu sarreeya ee Ameerika, $1,327 bishii. Natiijo ahaan gobolku wuxuu leeyahay dhibcaha 49-aad ee ugu xun ee walaaca la xiriira lacagta, taas oo ay weheliso dhibcaha 48-aad ee ugu xun ee arrimaha deegaanka sida xaaladaha xun ee wadooyinka waaweyn iyo inay noqoto gobolka labaad ee ugu qaylada badan, taasoo keentay in Hawaii ay noqoto gobolka ugu walaaca badan ee Maraykanka.
Hawaii ayaa lagu qiimeeyay inay tahay gobolka ugu walaaca badan Maraykanka, oo u soo galay mid ka mid ah gobolada ugu xun lacagta iyo walbahaarka deegaanka la xiriira.
Florida waxa lagu qiimeeyay inay tahay gobolka labaad ee ugu walaaca badan Maraykanka, taasoo muujinaysa darajooyin aad u liidata xagga lacagta, shaqada, caafimaadka, iyo walbahaarka deegaanka.
Vermont waa gobolka ugu walaaca yar, oo ku daraya inuu yahay gobolka labaad ee ugu walaaca yar qaybaha caafimaadka iyo deegaanka labadaba.
Hawaii ayaa lagu qiimeeyay inay tahay gobolka ugu walaaca badan Maraykanka.
Khubarada hurdada ayaa sameeyay cilmi baaris ay ku ogaanayaan xaaladda ugu walaacsan ee Mareykanka ee lagu noolaado, iyagoo ku saleeyay falanqaynta 22 arrimood oo walaaca kala duwan ee la xiriira shaqada, lacagta, caafimaadka, iyo deegaanka. Daraasadu waxay ogaatay in Hawaii ay tahay gobolka ugu walaaca badan, Vermontna ay tahay tan ugu yar.
Gobolladu waxay heleen dhibco 10 ka mid ah qodob kasta, oo ay ku jiraan guryaha iyo qiimaha kirada, dakhliga, heerarka niyad-jabka, dhaqdhaqaaqa jireed, heerarka hurdada, helitaanka meelaha bannaan, iyo heerarka qaylada.
Hawaii liiska ugu sarreeya ka dib markii uu si gaar ah u dhaliyay lacagta iyo walaaca deegaanka. Celceliska qiimaha guriga ee gobolka waa $1,293,301, kan saddexaad ee ugu sarreeya Maraykanka, halka uu sidoo kale leeyahay qiimaha kiraynta ugu badan ee Ameerika, $1,327 bishii. Natiijo ahaan, gobolku wuxuu leeyahay 49th Dhibcaha ugu xun ee walaaca la xiriira lacagta, kaas oo ay weheliyaan 48th Dhibcaha ugu xun ee arrimaha deegaanka sida xaaladaha waddooyinka oo liita iyo inay tahay gobolka labaad ee ugu qaylada badan, ayaa horseeday Hawaii isagoo ah gobolka ugu walaaca badan Maraykanka.
Florida waa gobolka labaad ee ugu walaaca badan, darajadana liidato iyadoo ay ugu wacan tahay arrimo ay ka mid yihiin heerka shaqo la'aanta, iyadoo 6.5% dadku isu diiwaangeliyeen shaqo la'aan. Dakhliga guud ee la isku habeeyey ee isbarbardhigga hooseeya ee gobolka, tirada yar ee xarumaha caafimaadka dhimirka qofkiiba, jardiinooyinka qaranka iyo meelaha bannaan ee mayl laba jibaaran oo dhul ah, iyo heerarka qaylada ayaa sababay. Floridadarajada hoose
Dhamaadka kale ee miisaanka, daraasadda ayaa lagu qiimeeyay Vermont oo ah gobolka ugu walaaca yar. Vermont ayaa ka warbixisay heerka ugu hooseeya ee saboolnimada diiwaangashan qofkiiba, taas oo si weyn u yaraynaysa culayska dhaqaale ee gobolka. Gobolku waxa kale oo uu leeyahay saamiga labaad ee ugu fiican ee xarumaha daawaynta caafimaadka dhimirka qofkiiba, iyo mid ka mid ah gobolada ugu sareeya dhaqdhaqaaqa jidhka iyo hurdo ku filan, taasoo horseedaysa in gobolka uu ka galo darajada labaad ee qaybta hoosaadka walaaca la xidhiidha caafimaadka.
Tim Slear wuxuu leeyahay,
Oktoobar 25, 2021 at 19: 32